ikhaya/Videos/Faka Windows 11 umdlali omtsha wemidiya
embi21. Novemba 2021
Namhlanje siza kukubonisa indlela yokufaka isidlali semidiya entsha Windows 11.
Okokuqala undwendwela eli phepha:
Apha ukhetha le phakheji ilandelayo:
PackageFamilyName, embindini ukhetha Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe kwaye ukhethe phantse.
Ngoku ukhetha oku kulandelayo:
Okanye ucofe kule fayile ukuba usebenzisa iEdge Browser, kungenjalo cofa ekunene kwaye ugcine ukhuphelo njenge.
Yikhuphe yonke into ngeWinRar okanye i-ZIP esixhenxe.
Ngoku khangela le fayile ilandelayo kwaye uyikhuphe kwakhona:
Okulandelayo, khangela le fayile kwaye uyivule ngomhleli:
Ngoku tshintsha ixabiso ku: 10.0.22000.0 kwaye ugcine yonke into kwakhona.
Okulandelayo kufuneka ucime ezi fayile zine:
Xa unayo loo nto, yivule izilungiselelo kwaye uchwetheze kwifestile yokukhangela: Iinketho zomphuhlisi kwaye uvule indlela yomphuhlisi apha.
Ngoku vula i-PowerShell njengomlawuli:
Apha ungenisa lo myalelo ulandelayo ukucima umculo wegroove:
Fumana-AppxPackage * zune * | Susa-AppxPackage -AllUsers
Ngoku tshintshela kwifayile: AppxManifest, ubambe iqhosha leShift kwaye ukhethe: Khuphela indlela.
Buyela kwiPowerShell kwaye ufake lo myalelo ulandelayo apha:
Yongeza-AppxPackage -Bhalisa i-ctrl + V (indlela yomhla)
Sele uyifakile isidlali semidiya esitsha.
Ukuba ufuna ukucwangcisa oku njengomdlali osemgangathweni, ngoko ucofe ekunene kwifayile oyifunayo: vula nge... .. khetha inkqubo kwaye emva koko ukhangele ibhokisi: Soloko uvule ifayile efunwayo ngodweliso lwenkqubo.
Bhalisa kwiYouTube yethu: ➡️
I-MAGIX ye-Movie Hlela iPro Pro 2021 yesishwankathelo sePrimiyamu
Nika amandla ukuqala kweWindows 8.1 ngokukhawuleza
Sebenzisa Windows 10 ibhokisi yesanti
Fihla iifayile ezisandula kusetyenziswa Windows 10
Qhagamshela i-Hisense ULED TV kwi-Intanethi
Yongeza Windows 11 ifolda kwimenyu yokuqalisa
Ungalungisi Windows 10 izixhobo zeBluetooth
Umphathi womsebenzi njengomlawuli Qala iWindows 8
Imibonakalo Ifa 2013
izilungiselelo 11 Windows windows imiyalelo iingcebiso zewindows Iingcebiso zewindows 2021 windows ubuqili windows ubuqhetseba 2021 iiwindows tutorials
Imiyalezo ye-61 Ukuthandwa kwe-4
Namhlanje siza kukubonisa indlela yokufaka isidlali semidiya entsha Windows 11. Okokuqala undwendwela eli phepha: https://store.rg-adguard.net Apha ukhetha le phakheji ilandelayo: PackageFamilyName, embindini ukhetha Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe kwaye ukhethe phantse. Ngoku ukhetha oku kulandelayo: Microsoft.ZuneMusic_11.2110.34.0_neutral_ ~ _8wekyb3d8bbwe.msixbundle Okanye nqakraza kule fayile ukuba unayo ...